Saturday, December 26, 2009 Saturday, January 8, 2011 Bill Dawson
Ndị na-ere ahịa na-etinye oge ezumike ka ukwuu na ụbọchị izu ike. Mgbe m lechara ụmụ nwanne m anya nyochaa NORAD maka ọganihu Santa na mba ụwa, echere m na ọ ga-aba uru ịtụgharị uche na nsonaazụ ahịa dị mma maka oge ezumike ahụ.
Ọ bụ ezie na uwe Santa Claus na-acha uhie uhie na nke ọcha bụ ihe a ma ama kemgbe afọ ole na ole, Haddon Sundblom mere ka nke a sie ike site na ịmepụta ọtụtụ ihe atụ maka Coca-Cola na 1930s. Ebubere na mbụ iji nyere aka ire ahịa soda na-ada n'oge ihu igwe, ihe atụ Sundblom toro na ewu ewu ma nyere aka kwalite onyonyo a.
Dị ka anyị niile maara, Rudolf the Red-imi Reindeer na-eduzi sleigh Santa. Onye edemede edeputara Rudolf na Montgomery Ward. Companylọ ọrụ ahụ na-anwa ịchekwa ego site na akwụkwọ agba agba ha na-akwụ kwa afọ, wee kpebie ịmepụta nke ha. Robert L. May kere akụkọ na rhyme, nke kesara nde 2.4 na 1939. Nwanne nwanne nwanne May mechara soro Gene Autry soro 1949 mepụta abụ ahụ, ikekwe ị na-agụ paragraf a dum.
Nimụ nwanne m nwanyị nwere ike ịgbaso ụzọ Santa na-eme kwa afọ, n'ihi na ụlọ ahịa dị na Colorado Springs dabeere na Sears bipụtara mgbasa ozi na-ekwupụta, “Hey, diesmụaka! Kpọọ m kpọmkwem ma jide n'aka na pịa nọmba ziri ezi. ” N'ụzọ dị mwute, Sears bipụtara nọmba ezighi ezi maka Santa, nke dara n'ime ụlọ ọrụ arụmọrụ CONAD. Colonel Harry Shoup gwara ndị ọrụ na CONAD, nke a maara ugbu a dị ka NORAD, ka ha mata ọnọdụ Santa nye ụmụaka ọ bụla kpọrọ - ugbu a afọ iri ise gachara, ọdịnala ahụ gara n'ihu.
Na mmụọ nke ezumike, ka anyị gbaghara echiche ndị ahụ banyere ire ahịa obi ọjọọ - ma kelee ndị nyeere anyị aka iwepụta ọdịnala Ezumike? Maazị Sundblom, Maazị May, Sears na NORAD. Oge Ezumike!
Tags: google mobile mobile ngwagoogle docsolu isiokwuNdị ọbịa pụrụ ichenletawhitelabel
Bill Dawson bụ ọkachamara n'ịntanetị na ngwa ngwa email, na-atụle ma nnukwu ụlọ ọrụ na ngwanrọ dị ka ndị na-enye ọrụ na ntinye email ha, njiri na nnyefe ha. Bill na ụfọdụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na-arụ ọrụ na ntanetị, gụnyere Zappos na Walmart. Ya na nwunye ya, Carla, nwere ma na-elekọta ụlọ ọrụ nke aka ha, 4 Nkịta Chepụta.
Ndi Ọkachamara SEO gị abawanyere okporo ụzọ Organic 84%?
Dec 30, 2009 na 10:06 PM
Ejighị Santa anyị mara taa maka Coca-Cola. Ntughari gi snopes.com kwuru nke a. Ana m achọta ntakịrị esemokwu na / ma ọ bụ mgbagwoju anya banyere mmalite Santa nke oge a. Agụrụ m nke a site na Nwepụta Na-enweghị Nso: http://jillharding.com/blog/2009/coke-brand-santa-claus/.